Your Question :: Nepal News, Nepali Samachar | UJYAALO ONLINE :: Nepal News, Nepali Samachar
Thu, Oct 29, 2020 | 12:56:43 NST
श्रम स्वीकृतिको म्याद हुँदाहुदै फेरि अर्को श्रम स्वीकृती लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
प्रश्न :मेरो वैदेशिक रोजगारी श्रम स्वीकृती २ बर्षको छ। यहि २ बर्ष बिचमा म बिदामा फर्किएँ भने (श्रम स्वीकृतिको म्याद हुँदाहुदै) फेरि अर्को श्रम स्वीकृती लिनुपर्छ कि पर्दैन? उत्तर : चन्द्र जी, तपाईंको श्रम स्वीकृतिको अवधि बाँकी भएकाले फर्केर जान फेरि अर्को श्रम स्वीकृती लिनु पर्दैन। तर केहि महिनापछि नै तपाईंको श्रम स्वीकृति सकिदैछ भने विदेश फर्कनअघि श्रमस्वीकृति लिएरै जानु बुद्धिमानी हुन्छ। विदेशबाटै श्रम स्वीकृति लिन झञ्झटिलो प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रमस्वीकृति नभएको खण्डमा विद...
सरकारले अब देखि भारत जान पनि पासपोर्ट चाहिने गरी तयारी गरिहरेको भन्ने सुनेको छु। यो साँचो हो?
प्रश्नः सरकारले अब देखि भारत जान पनि पासपोर्ट चाहिने गरी तयारी गरिहरेको भन्ने सुनेको छु। यो साँचो हो? उत्तरः बम जी, भारत जान पासपोर्ट चाहिन्छ भन्ने सत्यता छैन्। भारतमा रोजगारी गर्न जानेहरुलाई पनि सरकारले खाडीका देशहरु, मलेसिया जाने जस्तै गरी व्यवस्थित गर्ने तयारी भने गरिरहेको छ। रोजगारीका लागि भारत जानेहरुका लागि बिमा गर्ने तयारी भने गरिँदै छ। उनीहरुको तथ्याङ्क राख्ने तयारी पनि हुँदैछ। त्यसका लागि सरकारले कार्यदल बनाएको र तीन महिनापछि अरु निर्णय हुनेछ।...
वैदेशिक रोजगारीमा जान कहाँ सम्पर्क गर्ने होला ?
प्रश्नः म वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छु। तर यसबारे मलाई यस बारे केही पनि थाहा छैन। कहाँ सम्पर्क गर्ने होला ? उत्तरः तुलबहादुर जी, सात सय ५४ वटा म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछन्। काठमाडौंमा रहेका ती म्यानपावरबारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको वेभपेज nafea.org.np बाट जानकारी लिन सकिन्छ। विदेशका कम्पनीबाट ती म्यानपावरले डिमाण्ड ल्याउँछन्। त्यसैका आधारमा नेपालबाट कामदार पठाउँछन्। उनीहरुले दैनिक पत्रपत्रिकामा विदेशमा कामदारको माग भएकोबारे विज्ञापन गरेका हुन्छन्। विज्ञापनमा ...
सेल्स र मार्केटिङमा वैदेशिक रोजगारीमा जान कसरी सकिन्छ ?
प्रश्नः म विदेश जान चाहन्छु। अध्ययन प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण छुँ। सेल्स र मार्केटिङमा रुचि छ। उमेर २२ वर्ष। अब म के कसरी अगाडी बढ्न सक्छु बताईदिनुहोला। उत्तरः तिलक जी, सेल्सम्यान र मार्केटिङको कामका लागि युएई, साउदी अरब, कतार, कुवेतजस्ता खाडीका देशहरुबाट प्रशस्त अवसर आउँछन्। त्यसका लागि कामदारको माग ल्याएका म्यानपावर कम्पनीमा सम्पर्क राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुहुन्छ। मागपत्रबारे म्यानपावरले दैनिक पत्रिकामा पनि विज्ञापन छपाएका हुन्छन्। तर प्रक्रिया बढाउनुअघि त्यो म्यानपावरले वैधानिक रुप...
म्यानपावरलाई एक लाख पैतालीस हजार तिरेर दश हजारको भार्पाइ लिएर जाउँ ?
प्रश्नः म दुवईमा वाचम्यानको लागि अन्तरवार्ता दिएर जाने तर्खरमा छु। म्यानपावरलाई लागत खर्च बारेमा सोधखोज गर्दा मेरो अफिस खर्च जोडेर कुल रकम एक लाख पैतालीस हजार लाग्छ भन्यो। तर भर्पाइ चाहि दश हजारको मात्र दिन्छ रे। विमानस्थलमा सोधपुछ गरे पनि दश हजार नै भन्नुपर्छ नत्र झन्झट आइलाग्छ र विदेश जान पाइन्न रे। त्यसैले हामीले भने अनुसार गर वा आफ्नो पासपोर्ट फिर्ता लिएर जाउ भनेको छ। म विदेश गएर कुनै समस्या परि फर्कनु परे कुन उपायले कहाँ गएर तिरेको रकम उठाउने ? यस्तै समस्या मेरै ६ जना साथीहरूको छ। अब ...
कतारमा कफला प्रणाली खारेज भइसकेपछि गरिरहेको काम छाडेर अन्य काम गर्न पाउँछु?
प्रश्नः म चार महिना देखि कतारको ग्रुपफोर सेक्युरीटी कम्पनीमा काम गरिरहेको छु। अहिले कतारमा कफला प्रणाली खारेज भएको छ। अब म सेक्युरीटी गार्डको काम छाडेर अन्य काम गर्न चाहान्छु। मैले गर्न पाउँछु की पाउँदिन? उत्तरः प्रोफेसर डा. रमजान अलि मिया, मानवअधिकार समिति कतार, नेपाल प्रतिनिधी - सर्बप्रथम तपाईंको कतारको आवासिय भिसा (रेसिडेन्ट परमिट) लागिसकेको छ भने तपाईंले आफ्नो एग्रीमेन्ट पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो तपाईंको आवासिय भिसा लागेको छैन, सेक्युरीटीको भिसामा हुनुहुन्छ र एग्रीमेन्ट पनि भएको ...
म विदेश जान सक्दिन भन्दा मेरो पासपोर्ट फिर्ता पाउँछु कि पाउँदिन?
प्रश्नः मैले कतार जानको लागि मोरङको उर्दाबारीमा रहेको म्यानपावरको एजेण्टलाई पासपोर्ट बुझाएको थिए। मैले अन्तरवार्ता र मेडिकल पनि पास गरे। त्यसको १५ दिनमा भिसा आउछ भनेको थियो तर चार महिना बितिसक्दा पनि भिसा आएन। त्यस पछि म पनि बिरामी भए। म अब जान सक्दिन मेरो पासपोर्ट फिर्ता दिनु भन्दा दिनु भएको छैन। अब म जान सक्दिन भन्दा मेरो पासपोर्ट फिर्ता पाउँछु कि पाउँदिन? उत्तरः प्रदिप जी, कानुन अनुसार तपाईंको पासपोर्ट कुनै संस्था वा व्यक्तिले तीन महिना भन्दा धेरै समय राख्न वा ‘होल्ड’ गर्न...
भीसा आउन यति धेरै समय लाग्छ र ?
प्रश्नः मैले म्यानपावरमा पासपोर्ट दिएको ६ महिना भयो । अन्तर्वार्ता पास गरिसकेको छु । तर भीसा आएको छैन् । म्यानपावरमा बुझ्दा वैदेशिक रोजगार विभागले डिमाण्डमा साइन गरेको छैन भन्छ । यस्तो पनि हुन्छ र ? उत्तरः कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - होम जी, साधारणतया यति धेरै समय लाग्दैन। ढिलामा दुई देखि तिन महिना लाग्न सक्छ। त्यो पनि दुवई, कुवेत, ओमान, कतार, बहराइनको लागि। साउदि त तुरुन्तका तुरुन्तै हुन्छ। मलेसियाको हकमा कलिङ् भीसा हेरेर थाहा हुन्छ। तर यति लामो समय भने ला...
म कान कम सुन्छु। म विदेश जान पाउँछु कि पाउँदिन् ?
प्रश्नः म कान कम सुन्छु । बिएड पास गरेको छु । उमेर ३० बर्ष भयो । रोजगारीका लागि विदेश जान चाहन्छु । म विदेश जान पाउँछु कि पाउँदिन् ? अनि विदेश पुगेपछि कुनै समस्या पर्ला कि ? उत्तरः कैलाश खड्का, अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ - दिपक जी,सबै भन्दा पहिले तपाईंको श्रवणशक्ती कती हो त्यो जाच गर्नुपर्‍यो। यदि अाैषधी गरेर वा कुनै यन्त्र जडान गरेर तपाईंको श्रवण शक्ती साधारण अवस्थामा फर्किन्छ भने तपाईंलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान कुनै समस्या हुदैन। अन्यथा सबै जसो गन्तब्य मुलुकले श्रवणशक्ती कम ...
म नेपाल फर्केर फेरी साउदी जान पाउँछु कि पाउँदिन् ?
प्रश्नः म सन् २००७ मा साउदी अरब गएको थिएँ । भनेजस्तो काम र कमाई नभएपछि तीन वर्ष अवैधानिक भएर काम गरें । फेरी सन् २०१० मा १७ दिन जेल सजाय भोगेर पासपोर्टबिना नेपाल फर्किएँ । अहिले कुवेतमा छु । अब म नेपाल फर्केर फेरी साउदी जान पाउँछु कि पाउँदिन् ? उत्तरः उत्तरः कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - साउदीमा कुन अपराधको लागि थुनामा पर्नु भएको हो। यदि चोरी चकारी, कानुन तोडेको होइन भने खासै समस्या हुदैन। साउदीमा नयाँ नियम अनुशार अवैधानिक भएर फर्केका कामदार पनि फेरी साउदी जा...